How to get To Tomorrowland By Train | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > How to get To Tomorrowland By Train
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 14/08/2020)
Raha toa ianao nanontany tena ny fomba hahatongavana any Tomorrowland lamasinina, dia mijery intsony. Boky ny saran-dalana ho Tomorrowland mialoha amintsika! Raha toa ianao teoE ny tsara vintana olona manana tapakila ho Tomorrowland amin'ity taona ity, ho azo antoka fa tsy avelanao amin'ny minitra farany ny antsipirian'ny dia!
Rahoviana no Tomorrowland?
Tsy ho ela mandra- festival kicks eny, ka ho azo antoka ianao nanomana amin'ny Tomorrowland lamasinina tapakila. Tomorrowland dia mitranga amin'ny faran'ny herinandro roa ho 2018. Izany ny roa farany faran'ny herinandro tamin'ny volana Jolay: 20-22ND sy 27- 29faha. ny fanangonana, dia ny mialoha ny fetibe hetsika ho an'ny mpilasy in Dreamville, mitranga Jolay 19 Jolay 26, ary avy eo ho an'ny faran'ny herinandro 2.
Access To Tomorrowland lamasinina:
Samy afaka mahazo ny fetibe ihany no azo atao raha toa ka manana marim-pototra Tomorrowland fehin-tanana voasoratra anarana ny anaranao.
Brussels ny boom Lamasinina
Antwerp ny boom Lamasinina
Liege ny boom Lamasinina
Charleroi ny boom Lamasinina
Amin'ny zoma & Asabotsy, jereo-in dia mivoha hatramin'ny 22h00. Access, dia holavina kosa rehefa afaka izany fotoana.
Ny alahady maso-in Mifarana amin'ny 21h00. Access, dia holavina kosa rehefa afaka izany fotoana.
Tomorrowland dia tsy misy fanontaniana ny fetin'ny mozika tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao. More firenena any Tomorrowland noho ny tamin'ny Lalao Olaimpika. Izany tokoa ny tsy manam-paharoa traikefa ary tonga lafatra fomba hahatsiaro mifandray. Isan-taona dia maniry dia lehibe kokoa, koa tsy mahazo sahiran-tsaina noho ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanehoana tsy mbola vonona, mahazo ny Tomorrowland lamasinina.
How to get To Tomorrowland By Train:
Tomorrowland mitranga amin'ny fialam-boly faritra, De Schorre, in Boom. Ny tanàna ny Boom dia toerana ao amin'ny Belzika, eo Anvers & Brussels. Io tanàna kely manova ho antoko sehatra. Matetika izy ireo tanàna mangina mampiseho ny Tomorrowland saina teo amin'ny varavarankely nandritra ny fety.
Ny tena tsara indrindra peo ka tsy tokony Tomorrowland lamasinina dia ny hahazo ny Antwerp Central. Raha vao ianao eto ianao te-handeha fiaran-dalamby mba hahazo iray hafa boom.
Mialà eny amin'ny toby Boom sy handray fiara fitaterana mivezivezy malalaka ho Tomorrowland / DreamVille. Isaky ny avy ny andro fety, telo fanampiny alina fiarandalamby hihazakazaka ho any Anvers Central Station.
VAOVAO: Amin'ny andavanandro, misy ankehitriny 2 fiaran-dalamby isan'ora eo Antwerp-Afovoany sy Boom. Ny sabotsy sy alahady: 1 fiaran-dalamby isan'ora.
Rotterdam ny boom Lamasinina
Paris ny boom Lamasinina
Maastricht ny boom Lamasinina
Amsterdam ny boom Lamasinina
Inona no atao hoe Tomorrowland Like?
Ankehitriny fa efa nomeko anareo mpanao an-idina tsipiriany ao amin'ny Tomorrowland lamasinina, tonga ny fotoana ho an'ny mahafinaritra anjara! Raha izany ny fotoana voalohany mankany Tomorrowland, manontany tena angamba ianao ny zavatra mitranga dia ho toy ny. Tomorrowland dia tena manan-danja ao anatin'izao saritaka no noforonina izay manodidina azy. Tomorrowland efa nifidy ny undisputed fetin'ny mozika EDM lehibe indrindra eto an-tany nandritra ny taona maro mihazakazaka. Mitsidika, fara fahakeliny, indray mandeha indray ny androm-piainany efa lasa tsy maintsy ho an'ireo mpankafy mozika, antoko goer na ny festival mafana fo. Tomorrowland 2018 no mamolavola ny ho lehibe indrindra ao amin'ny tantaran'ny fetibe. Izany dia tena Mahavariana mahafinaritra maro mpanakanto iraisam-pirenena ho amin'ny mazava napetraka ny 16 tsy mampino dingana.
Ankoatra ny fananana iray tsy mampino lineup, ny mpikarakara toa Efa nieritreritra ny zava-drehetra, anisan'izany fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana afaka nanakarama, toerana handidy ny findainao ary na ny vola antsoina hoe perla. Manana safidy samy hafa an-tampon'ireo-up ny fehin-tanana amin'ny vato soa: Azonao atao ny manampy vato soa amin'ny internet ao amin'ny ny Tomorrowland Account, am-kiheba 'ny fehin-tanana’ talohan'ny fetin'ny amin'ny carte de crédit (VISA, Mastercard), Bancontact, Sofortüberweisung na lafatra. Izany tena lasa toerana izay afaka miala ao ambadiky ny fanahiana rehetra!
Tsy fahazoan-dalana mankany fa manaraka Tomorrowland tao amin'ny Facebook mba hahazoana ny vaovao farany momba ny lineup sy ny andro firavoravoana amin'ny ankapobeny, ary afaka ihany koa ny manaraka Vonjeo A Train Twitter
Fa misy Eoropa fiaran-dalamby tapakila, indrindra fa Tomorrowland lamasinina avy amin'ny manerana an'i Eoropa, Ampidiro fotsiny Save A Train vohikala sy hankafy ny fiaran-dalamby mitaingina.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tomorrowland-by-train/- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / nl ny / de na / fiteny azy sy ny maro hafa.